Cilmi-baadhid ku Saabsan Cudurka Cancer-ka | Xarshinonline News
Cilmi-baadhid ku Saabsan Cudurka Cancer-ka
Hordhac…..Aqoon la’aani waa Iftiin la’aan, Qof kasta oo dunidan ku nooli wax walba ma wada yaqaan, kolay waxna wuu yaqaan waxna waa ka dhimanyiin. Hadaba waxa muhiim ah in dadku ay isku dayaan in wax ka ogaadaan Aqoonta guud, siiba wax yaalaha la xidhiidha Aqoonta guud ee Caafimaadka iyo saxada.
Cancer-ka waxaa keena unugyo aan caadi ahayn oo si deg deg ah u kora. Jidhka dadka caadi ayey u tahay in uu unugyada gaboobay ama duugoobay ku beddelo kuwo cusub, laakiin unugyada Cancer-ku si deg deg ah ayey u koraan.
Unugyada Cancer-ka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay sameeyaan koritaan loo yaqaanno burooyin. Burooyinka oo dhan cabbirkoodu wuu kordhaa, laakiin burooyinka qaarkoodna si deg deg ah ayey u koraan, kuwa kalena si gaabisa.
• Burooyinku qaarkood maaha kuwo Canser leh. Kuwa aan sidin Cancer-ka waxa la yidhaahdaa burooyin aan halis ahayn. Waxay ka samaysan yihiin unugyo aad ula mid ah unugyada caafimaadka qaba. Burada noocaas ah waxa ay iskaga taalaa hal meel ah, kumana fido unugyada iyo xubnaha caafimaadka qaba.
• Burooyinka Cancer-ka ah waxa la yidhaahdaa burooyinka halista ah. Cancer-ka ka yimaada burooyinkaan, isaga oo u maraya dhiigga iyo habka dheecaanka jidhka ayuu ku faafaa qaybaha kale ee jidhka.
• Karsenoma (carcenoma) waa nooca ugu badan ee kansarka. Kansarrada sanbabka, xiidmaha, weyn, naaska, iyo ugxansiduhu badanaa waa noocaan.
• Sarkooma (sarcoma) waxaa laga helaa lafta,baruurta, iyo muruqa.
• Jidhka oo misaanku ka dhaco iyada oon la’ogayn sabaabta
• Qalliin meesha laga saarayo burada iyo unugyada u dhow
← Shirkadda Wadaniga SOMCABLE oo dalka keenaysa Xadhigga Isgaadhsiinta ee Badda iyo berrigaba mara
Abwaan Hadraawi oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sababta ay u degi la’dahay →